Dabaysha isbaddal ee Geeska Afrika oo ganacsi u fureysa Soomaaliya – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa la qoray September 10, 2018 February 14, 2019
Waxaa Qoray: Xasan Cali Khayre
Maalmo yar ka hor, dowladaha Jabbuuti iyo Erateriya waxa ay ku heshiiyeen in ay xiriirkooda dib u hagaajiyaan, isla-markaasna bog cusub u furaan danaha labada waddan oo uu horay qalqal siyaasadeed soo kala dhexgalay.
Dowladdeennu waa mid shaqeyneysa. Waxa aan bixinnay mushaarka shaqaalaha rayidka ah, ciidamadeennana waxaa ka go’an in howl-galladooda ay sii xoojiyaan. Sidoo kalena waxa aan xiriir aad u wanaagsan la sameysanay beesha caalamka. Hay’adda Lacagta Adduunku waxa ay Soomaaliya ku bogaadisay dib-u-habeynta iyo qaabeynta aan ku sameynnay kobcinta dhaqaalaheenna.
Mudane Xasan Cali Khayre; Ra’iisul wasaaraha Xukuummadda Federaalka ah ee Soomaaliya
Isha: Daily Nation
Waaxda Warbaahinta iyo Xariirka
Qormadii HoreHore Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Dhagax Dhigay Xarunta Wasaaradda Qorshaynta Oo Dib-U-Dhis Iyo Dayactir Lagu Samaynayo
Qormada XigtaKu Xiga Guddi Hoosaadka Golaha Wasiirrada Ee Arrimaha Bulshada Oo Ka Hadlay Yaraynta Faqriga iyo Horumarinta Waxbarashada